Rugby: tohanan’ny Sumitomo Corporation ny Makis vehivavy | NewsMada
Rugby: tohanan’ny Sumitomo Corporation ny Makis vehivavy
Ho fanamafisana ny fiaraha-miasa efa nisy eo amin’ny orinasa Sumitomo Corporation Japoney sy i Madagasikara, mitondra fanampiana ho an’ny ekipa malagasy vehivavy miatrika fiofanana any Japana ity orinasa ity. Hiantohan’izy ireo ny ampahany amin’ny fivahinian’ireto mpilalao rugby malagasy, any Japana, ireto. Tafiditra ao anatin’ny fidirana an-tsehatra amin’ny fifanohanana amin’i Madagasikara, eo amin’ny lafiny kolontsaina sy fanatanjahantena, ary ho fanampiana ny fanatanjahantena natokana ho an’ny vehivavy malagasy izao tolo-tanana ataon’ny Sumitomo Corporation izao.
Natomboka tamin’ny “nofo-kena mitam-pihavanana”, notontosaina teto Madagasikara, tamin’ny 10 jona, nialoha ny hiaingan’ny Makis vehivavy ho any Japana, ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta ary izao mihamafy izao hatrany. Marihina fa tsy vao sambany ny fanampian’ity orinasa ity an’i Madagasikara, efa nisy izany nandritra ny fandalovan’ny rivodoza Enawo sy ny tetikasa ho famongorana ny valanaretina pesta, niarahana tamin’ny BNGRC. Firenena miisa 66 amin’izao no efa miara-miasa amin’ity orinasa japoney ity, eo amin’ny sehatra toekarena. Anisan’ny mandray anjara mavitrika amin’ny tetikasa Ambatovy ihany koa ny Sumitomo Corporation.
Tsahivina fa lalao miisa enina ny natrehin’ny Makis vehivavy any Japana. Anisan’ny nifanandrina tamin’izy ireo tamin’izany ny ekipan’ny Colombie. Rahampitso 26 jona no hifarana ity fiofanana any Japana ity, rehefa nanaraka izany nanomboka ny 16 jona lasa teo.